यिनै हुन् लोक बहादुर जस्ले ६ जनाको ज्या ’न लिएका थिए (भिडियो सहित) – Paluwa Khabar
यिनै हुन् लोक बहादुर जस्ले ६ जनाको ज्या ’न लिएका थिए (भिडियो सहित)
भाद्र २७, २०७८ आइतबार 38
संखुवासभा घटनामा ज्या’न गुमाएका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्की गत सोमबार धान गोड्ने तयारीमा थिए ।त्यसका लागि खेताला लिन उनी बिहान पाँच बजेतिर घर मास्तिरको बाटो हुँदै उकालो लागेका थिए । तर जुन घरबाट खेताला बोलाउन जान लागेका थिए, त्यही घरका २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीले बाटोमै उनको ह’ ‘त्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार लोकबहादुरले आफूले तेजबहादुरलाई मात्र मा’र्न चाहेको बयान दिएका छन् । तर घरका अन्य सदस्य पनि आएपछि अरुलाई पनि मा’र्न बा’ध्य भएको भनेका छन् ।
क’राउन थालेपछि आत्तिएका उनले घरतिर समेत गएर सबैको ह ”त्या गरेको साबिती बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस विषयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रहरी तयारी छ ।
६ बर्ष अगाडि मलेसिया गए पनि १० महिनामा आफु विदेश जाँदाको ऋण समेत नतिरी फर्किएको थापाको भनाई छ । त्यसको डेढ बर्षपछि पुनः बैदेशिक रोजगारीको लागि कतार पुगे नौ महिना नपुग्दै घर फर्किएको थियो ।
गत चैत २६ गते आमा बितेपछि बुवा र भाई सहित तीन जनाको परिवारमा लोकबहादुर बस्दै आएका थिए । ह’ ‘त्या गरिएको तेजबहादुरको घरमा उनको आमा बे’हो’स भएपछि उपचारको क्रममा झापामा मृत्यू भएको थियो ।
उनको आमाको मृत्युको कारण पनि तेजबहादुर नै भएको लोकबहादुरले आरोप लगाउदै आएको छिमेकीहरुले बताउने गरेका छन् । ह’ ‘त्याको खबर छिमेकीलाई लोकबहादुरले नै दिएको थियो ।
Prevत्यो बिहान जब तेजबहादुरलाई भतिज लोकबहादुरले देखे त्यसपछि
Nextआहा ! अन्जु पन्त र पति यसरी रमाइलो गर्दै,छमछमि नाच्दै (हेर्नुस् भिडियो )
सबैै बिध्यार्थिलाई निशुल्क सिम बितरण गर्न सञ्चारमन्त्रिकाे निर्देशन
सडक दु’ र्घटनामा मृ’ त्यु भएकी १३ बर्षिया बालिकाको शव अस्पतालमै कुकुरले खान थालेपछि…. (हेर्नुहोस् भिडियो)
प्रहरी पोशाकमा स्वीकृतिविना भिडियो बनाउनेलाई कारबाही गरिने
अन्त्यमा यी दुई शब्द बोल्दई बिदा भइन कलाकार निशा घिमिरे (हेर्नुहोस भिडियो)